Plusoption ပွဲစားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | သင့်ရဲ့ Account Type ကိုရွေးချယ်ပါရန်မည်သို့ Read - က ISO
PlusOption ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်းများနှင့်မိုဘိုင်း App ကို
PlusOption ဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့် 2015 ၌တည်ခဲ့သည့်တစ်ဦးအတော်လေးသစ်ကိုပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲစားနောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ကသာမန် binary ကုန်သွယ်၏ကမ္ဘာပေါ်မှာရှေ့ဆက်ကူညီနိုင်သည့်တစ်ဦးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပိုင်ဆိုင်မှု၏ကျယ်ပြန့်, ဒါပေမယ့်လည်းပညာပေးပစ္စည်းများနှင့်အတူကုန်သည်များများကိုရည်ရွယ်သည်။ ဒီ PlusOptions ပြန်လည်သုံးသပ်ခုနှစ်, ကြှနျုပျတို့သညျဤပွဲစားကမ်းလှမ်းသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသမျှတို့ကိုကြည့်ယူပါလိမ့်မယ်, ဤသင်တို့အဘို့, လက်ျာပွဲစားလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
PlusOption ယင်း၏ကုန်သည်များအကောင့်လေးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအကြားရွေးချယ်မှုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုအောက်ပါနေကြသည်:
PlusOption မှာမိုက်ခရိုအကောင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များက PlusOptions ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်နှင့်အညီ, အက start ကနေအများကြီးပိုက်ဆံငွေသွင်းချင်ပါဘူးသူတစ်ဦးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောအကောင့်တစ်ခုတစ်ခုကိုင်ရဖို့ကိုသင် $ 250 ၏နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဤအကောင့်နှင့်, သင် 190 ကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအကြားရွေးချယ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူလည်းနေ့စဉ်ဈေးကွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်ကုန်သွယ်သတိပေးချက်အရပါလိမ့်မယ်။
PlusOption မှာငွေအကောင့်ကတော့ $ 2.500 Micro နဲ့အကောင့်ကနေအကြီးအခုန်ဖြစ်သည့် $ 250 မှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကောင့်ကို, အမိုက်ခရို Accounts ကိုထံမှအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော features တွေမပူဇော်ဘူးသင်တန်း မှလွဲ. သင်နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုပိုပြီးပိုက်ဆံရှိသည်လိမ့်မယ်, သင်ကပိုဒီလောက်စွန့်ကြသောအခါတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကြီးဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် အကယ်. သင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်မန်နေဂျာနဲ့မိတ်ဆက် session တစ်ခုရလိမ့်မယ်။
PlusOption ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဆိုအရ PlusOption ကမ်းလှမ်းသောရွှေအကောင့်အကောင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ဆည်းကပ်-ပြီးနောက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Protected မြို့တော်, ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Analyst, & Webinars: $ 10.000 မှာစျေးနှုန်း, PlusOption မှာရွှေအကောင့်ထိုကဲ့သို့သောအောက်ပါအဖြစ်အများအပြားအသုံးဝင်သော features တွေနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။
အဆိုပါစိန်အကောင့်က PlusOption ကကမ်းလှမ်းအကောင့်အမျိုးအစားများမှကြွလာသောအခါ jack ကို-of All-အရောင်းဖြစ်ပါတယ်။ 190 Tradable ပိုင်ဆိုင်မှု, Daily သတင်းစာစျေးကွက်ဆန်းစစ်ခြင်း, ထရေးဒင်းသတိပေးချက်များ, ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မန်နေဂျာနိဒါန်း, Capital ကို Protected, ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်, ကိုယ်ပိုင် Analyst,: ဒီအကောင့်ကဒီပွဲစားရှိပါတယ်အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သောကမ်းလှမ်းရန်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည် & Webinars, VIP ဖြစ်ရပ်များ, အဆင့်မြင့်ဆုကြေးငွေနှင့်အထူး Ventures မှဖိတ်ခေါ်ပါ, အားလုံးဆင့်ကုန်သွယ်မှုအခန်းပေါင်း Withdrawal တဟုန်တည်းပြေး။
PlusOption အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ ပလက်ဖောင်းတွင်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို binary, တဦးတည်းထိတွေ့, လှေကားအဖြစ်ပွဲစားကမ်းလှမ်းမှုက The ပလက်ဖောင်းရှင်းပါတယ်နှင့်လိုအပ်ခလုတ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးမြင်နိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်အမျိုးအစားများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
PlusOption လည်း iOS နှင့် Android မှာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမရရှိနိုင်စမတ်ဖုန်းများနှင့်စားပွဲ app ကို download လုပ်ပါနဲ့သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေက၎င်း၏ client များပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါမိုဘိုင်း app ကိုကုန်သည်ကပင်ပြောင်းရွှေ့စဉ်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆက်လက်အခမဲ့ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်, ထို web-based ဗားရှင်းရှိပါတယ်သည့်အင်္ဂါရပ်များအယ်လ်ပါရှိသည်။
PlusOption ကုန်သွယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုက၎င်း၏ client ကိုကမ်းလှမ်း - 190 ကျော်အတိအကျဖြစ်ဖို့။ PlusOption မှာပိုင်ဆိုင်မှုလေးကိုအဓိကအမျိုးအစား၌ဝေဖန်နေကြသည်:
စတော့ရှယ်ယာ: Yandex NV, Yahoo, Wynn Resorts, Weibo, Wal-Mart, Volkswagen, Vodafone, UNICREDIT, TOYOTA မှ (အမေရိကန်), Toshiba Corp နှင့်အခြားသော;
Indicator: TOPIX, Tel Aviv 25, TADAWUL (ဆော်ဒီ Stock Exchange), SSE180 (ရှန်ဟိုင်းစတော့အိတ်ချိန်း), S & P 500 (အမေရိကန်), RTS (ရုရှားကုန်သွယ်မှုစနစ်), NIKKEI225 (JPN), NASDAQ (အမေရိကန်), MSM 30 (အိုမန်) , MICEX 10 (မော်စကို INTERBANK EXCHANGE) မှာ, ကူဝိတ် (ကူဝိတ်အထွေထွေ INDEX), KL နာဂ, ISE 30 (အစ္စတန်ဘူလ် Stock Exchange), Hang Seng (ဟောင်ကောင်) စသည်တို့;
ငွေကြေး: EUR / NZD, EUR / CHF, EUR / CAD, EUR / AUD, CAD / JPY, Bitcoin (BITSTAMP), AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, AUD / NZD, AUD / JPY, AUD / CHF, AUD / CAD, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / Zar အမေရိကန်ဒေါ်လာ / စမ်းကြည့်ပါနှင့်ပိုပြီး;
ကုန်စည်: စပါး, သကြား, ငွေ, ပလက်တီနမ်, OIL (အလင်းသည်ချိုရေနံစိမ်း), ရွှေနှင့်ကော်ဖီ
Tags: ဘယ်လို plusoption အလုပ်မ, plusoption, plusoption app ကို, plusoption binary ကုန်သွယ်, plusoption ပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, plusoption အဆက်အသွယ်, plusoption ရဲ့ login, plusoption နိမ့်ဆုံးသိုက်, plusoption စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်, plusoption ပြန်လည်သုံးသပ်, plusoption ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, plusoption လိမ်လည်မှု, plusoption လိမ်လည်မှုပြန်လည်သုံးသပ်, plusoption ကုန်သွယ်, plusoption ဆုတ်ခွာ
လေး +9=